परमाणु हतियारमा भारतभन्दा पाकिस्तान बलियो , जान्नुहोस् सैन्य शक्तिमा को कति शक्तिशाली? - Tamang Online
परमाणु हतियारमा भारतभन्दा पाकिस्तान बलियो , जान्नुहोस् सैन्य शक्तिमा को कति शक्तिशाली?
काठमाडौं। भारत र पाकिस्तानबीच अहिले सबन्ध निकै बिग्रिएको छ । दुई साताअघि भारतको पुलावामामा आतंकवादी आक्रमण भएपछि बिग्रिएको यो सम्बन्ध आज झनै चिसिएको छ । गएराती भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानी सीमाभित्र पसेर बम खसालेपछि यी दुईबीचको सबन्धमा झनै ठूलो दरार परेको हो ।
अहिले भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको आशंका पनि गरिएको छ । यी दुई देशबीच १९४७ देखि नै कश्मिर विषयमा विवाद छ । यदि यी दुई देशबीच युद्ध भइहाल्यो भने कुन देश शक्तिशाली होला भन्ने जिज्ञासा अहिले धेरैमा छ ।
इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (आइआइएसएस)ले हरेक देशको सैन्य शक्तिको तथ्यांक राख्ने गरेको छ । आउनुहोस् आइआइएसएसको तथ्यांकअनुसार जानौं कुन देश कति शक्तिशाली छ ।बजेटः २०१८ मा भारतले ५८ अर्ब डलर अर्थात आफ्नो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशत सैन्य बजेटको लागि छुट्याएको थियो ।
आइआइएसएसको तथ्यांकअनुसार भारतसँग १४ लाख जना सैनिक छन् । पाकिस्तानले २०१८ मा ११ अर्ब डलर अर्थात कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३.६ प्रतिशत बजेट सैन्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो । २०१८ मा पाकिस्तानले सय मिलियन डलर विदेशबाट सैन्य सहयोग पनि पाएको थियो ।
पाकिस्तानमा ६ लाख ५० हजार सैनिक छन् । स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्चइन्ष्टिच्युटका अनुसार ९९३ देखि २००६ सम्म पाकिस्तानले आफ्नो वार्षिक सरकारी खर्चको २० प्रतिशत सेनामा खर्च गरेको थियो ।
२०१७ मा पाकिस्तानले कूल सरकारी खर्चको १६.७ प्रतिशत सेनामा खर्च गरेको छ । ९९३ देखि २००६ सम्म भारतको सैन्य खर्च कूल सरकारी खर्चको १२ प्रतिशत थियो । २०१७ मा यो ९.१ प्रतिशत थियो । मिसाइल र परमा णु हतियारः भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणु हतियार सम्पन्न देश हुन् । भारतसँग ए कि सिमका अपरेशनल मिसाइल छन् । यसमा अग्नी ३ (३ हजार देखि ५ हजार किलोमिटर क्षमता) पनि समावेश छ ।
चीनको सहयोगबाट पाकिस्तानले पनि कैयौं परमाणु हतियार विकास गरेको छ जो भारतको कुनै पनि ठाउँमा आक्रमण गर्न सक्षम छन् । शाहीन २ पाकिस्तानको सबैभन्दा शक्तिशाली मिसाइल हो । भारतसँग १३० देखि १४० परमाणु बम छन् भने पाकिस्तानसँग १४० देखि १५० परमाणु बम छन् । अन्य हतियारः भारतसँग ३५६३ युद्ध ट्यांक छन् ।
यसका अलावा ३१०० इन्फेट्री लडाकू वाहन, ३३६ सशस्त्र पर्सनर क्यारिअर्स र ९७१९ तोप छन् । पाकिस्तानसँग २४९६ युद्ध ट्यांक छन् । १६०५ सशस्त्र पर्सनल क्यारिअर, ४४७२ तोप छन् ।वायु सेनाः भारतसँग ८१४ कम्ब्याट एयरक्राफ्ट छन् ।
भारतको वायुसेनामा १ लाख २७ हजार २ सय सैनिक कार्यरत छन् । भारतसँग फाइटर जेटको भने समस्या छ। पाकिस्तानसँग ४२५ कम्ब्याट एयरक्राफ्ट छन् । तर, पाकिस्तानसँग चीनमा बनेको एफ सेभेन पीजी र अमेरिकामा बनेको एफ सिक्सटिन फाइटिङ फल्कन जेट पनि छन् ।
पाकिस्तानसँग यस्ता एयरक्राफ्ट पनि छन् जसले हवाइ खतराको सूचना दिन्छन् ।जलसेनाः भारतीय नेभीसँग एउटा एयरक्राफ्ट क्यारिअर, १६ सबमरिन, १३ फ्रिगेट्स, ११०६ पट्रोल र कोस्टल कब्याट जहाज छन् । भारतीय नेभीमा ६७ हजा ७ सय सैनिक कार्यरत छन् । पाकिस्तानी नेभीसँग ९ फ्रिगेट्स, ८ सबमरिन, १७ पट्रोल र कोस्टल जहाज छन् ।
« बिस्क़ा जात्राको लागि चाहिने येसीं द्यो डोजरले तानेर भक्तपुर ल्याईयो (Previous News)
(Next News) आफैँले पढाउने चार छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्रधानाध्यापकलाई पाँच वर्ष कैद »